Iwu ọhụrụ EU ga-amachibido ndị ọbịa na-enweghị ọgwụ mgbochi si na mpụga mgbochi ahụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Iwu ọhụrụ EU ga-amachibido ndị ọbịa na-enweghị ọgwụ mgbochi si na mpụga mgbochi ahụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị European Council ga-ehichapụ atụmatụ Commission, ma ọ bụrụ na agafere ya, ọ ga-emetụta mba EU ọ bụla ma e wezụga Ireland, nke na-abụghị onye so na mpaghara Schengen na-enweghị oke.
The Ụlọ ọrụ European Commission (EC), ndị isi ngalaba nke European Union, nyere atụmatụ taa, na-atụ aro ka mba ndị otu UE niile na-enye ohere naanị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, gbakere, ma ọ bụ ndị njem dị mkpa (dị ka ndị ọkwọ ụgbọ ala) si na mpụga mpaghara Europe, dị ka nke Machị 2022.
Ndị ọbịa na-atụ anya ga-achọ igosi na a gbachara ha ọgwụ mgbochi ikpeazụ ọ dịghị ihe karịrị ọnwa itoolu tupu ha abanye, mmegharị nke na-eme ka ịgbanye agbam ume bụ iwu maka ọtụtụ ndị njem.
N'okpuru iwu ọhụrụ a tụrụ aro, ndị ọbịa ga-achọ ịgba agba ume kwa ọnwa itoolu ọ bụla.
The EU ugbu a na-atụ aro ka mba ndị otu kwe ka ndị njem si na ndepụta nke ihe karịrị mba 20 nwere “ọnọdụ ọrịa na-efe efe dị mma.” A na-ahapụ ndị njem si ebe ndị a - nke gụnyere Canada, New Zealand, na UAE - banye na EU nwere asambodo ọgwụ mgbochi, akaebe mgbake, ma ọ bụ ihe akaebe nke nnwale COVID-19 na-adịghị mma.
N'okpuru iwu ọhụrụ a, a ga-ewepụ ndepụta a, a ga-ahapụkwa ndị njem n'otu n'otu dabere na ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ọnọdụ mgbake naanị.
Ugbu a, European Medicines Agency (EMA) akwadola ọgwụ mgbochi Pfizer, Moderna, AstraZeneca, na Janssen. Ụlọ ọrụ ahụ na-enyocha Sputnik-V nke Russia, dịka Sanofi-GSK na Sinopharm nke China gbara.
N'okpuru atụmatụ ọhụrụ, nke European Union ga-enye ohere ịbanye ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi nke Healthtù Ahụ Ike (wa (WHO) kwadoro), mana ọ bụghị EMA. Nke a ga-ekpochapụ onye ọ bụla ejiri SInopharm, Sinovac, na ọgwụ mgbochi abụọ ndị India mere ịbanye, ọ bụrụhaala na ha na-enye nsonaazụ ule na-adịghị mma yana akaebe ịgba ọgwụ mgbochi.
Banyere 67% nke EU A na-enye ụmụ amaala ọgwụ mgbochi ugbu a megide COVID-19, n'agbanyeghị na mba n'otu n'otu ahụla ọnụego nnabata dị iche iche.
Agbanyeghị, ọbụlagodi na Ireland, nke nwere ọnụ ọgụgụ ịgba ọgwụ mgbochi kachasị na mgbochi na 93%, ọrịa nje ọhụrụ kwa izu amụbaala okpukpu atọ kemgbe mmalite nke Ọktọba, gọọmentị Irish na-atụle mgbochi ọhụrụ na ndụ kwa ụbọchị.
Kọmịshọna European Didier Reynders kwuru na Tọzdee, "O doro anya na ọrịa a akwụsịbeghị."